Baaritaankii Faragalinta Ruushka ee Doorashadii Mareykanka oo waji cusub galaya - BBC News Somali
Baaritaankii Faragalinta Ruushka ee Doorashadii Mareykanka oo waji cusub galaya
Baaritaannada suurtaglnimada in Ruushkuu uu faragaliay doorashadii madaxwaynanimada Mareykanka ee 2016 ayaa lagu wadaa in uu galo waji cusub todobaadkan, xilli ay jiraan warar sheegaya in dadkii ugu horreeyay oo loo xiro arrintani ay dhacayso maanta.
Baaritaankan ayaa hareeyay maamulka madaxwayne trump tan iyo intii uu xafiiska la wareegay bishii Janaayo.
Robert Mueller, oo ah agaasimaha laanta dambi baarista Mareykanka ee FBI ayaa loo magacaabay in uu eego suurtagalnimada xiriir dhexmaray gacanyarayaasha Trump iyo dowlada shisheeye xiligii ololahii doorashadii Mareykanka.
Waxaa sidoo kale la baarayaa lacago si sharci daro ah loo kala wareejiyay, canshuuro aan la bixin iyo dambiyo kale oo dhaqaale.
Waaxda dambi barista Mareykanka ee FBI ayaa sidoo kale baarayaan in Trump iyo kaaliyeyaashiisa ay isku dayeen in ay caqabad ku noqdaan baaritaannada iyo in kale.
Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in eedeyn waliba oo ah in uu xiriir kala dhaxeeyay Ruurshka ay tahay marin habaabin.
Wuxuu intaa ku daray in xubnaha xisbiga Jamhuuriga ay isaga tageersan yihiin ,waxa uuna ugu baaqay in arrintani ay wax ka qabtaan.
Ma cadda waxa ay dacwadaha noqon doonaan iyo cidda dacwad lagu soo oogi doono ,balse xiritaan waliba oo qof loo xiro arrintani waxa ay noqon doontaa tillaabo loo qaaday baaritaan baaxad leh oo la sameeyo.